ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ Disc ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် မှအရည်အသွေးမြင့် Disc ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် Disc ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် in Taiwan သောအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းမှအင်ဂျင်နီယာနှင့်၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တာရှည်ခံဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့အအသိအမှတ်ပြုသည်နေကြသည်။ ထိုထုတ်ကုန်အထူးသဖြင့်ကြာကြာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်အသက်, ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအသုံးပြုမှုများအတွက်လူသိများကြသည်။ ထို့အပြင်ငါတို့သည်လည်းပုံစံများနှင့်အရွယ်အစား, မတူညီကြပုံစံမျိုးစုံထိုထုတ်ကုန်ပေးစွမ်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းများမှာငါတို့မှအဲဒီအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပေးသော်လည်းကိုယ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံစံ - FORGED STEEL No. D80, D80F
●DSC D80 အပူနှင့်အပူချိန်ကာလအတွင်းရေရှည်သုံးစွဲမှုကာကွယ်ရန်အကာအကွယ်မဲ့ CAP ဖြင့်အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံနည်းကျရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်များ။.
●ဤပုံစံကို သုံး၍ ရေနွေးငွေ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်,ရေနံဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စွမ်းအင်စက်ရုံတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်.
●ဝက်ဝံ,SOCKET WELD သို့မဟုတ် FLANGE ချိတ်ဆက်မှုများရရှိနိုင်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/disc-steam-trap.html
အကောင်းဆုံး Disc ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် Disc ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ Disc ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan